Waa maxay Maalgelinta Kobaca? Dulmar - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Waa maxay Maalgelinta Kobaca? Dulmar
Isha sawirka: Tarhan Hukuk Burosu
Kobacdu waa lama huraan xagga ganacsiga ah, waxay awood u siinaysaa ganacsatada inay ka faa'iidaystaan ​​fursadaha cusub, ballaariyaan alaabtooda iyo adeegyadooda, helaan macaamiil cusub, kordhiyaan iibka iyo inay shaqaaleeyaan shaqaale. Shuruudaha suuqa. Waxa kale oo ay siin kartaa shirkad kalsooni dheeraad ah oo u oggolaanaysa inay ka fogaato tartanka. Laakiin si ay si guul leh u koraan, shirkaduhu waxay u baahan yihiin raasamaal. Maqaalkan, waxaan ku baran doonaa maalgelinta koritaanka iyo sida ay u shaqeyso
Waa maxay Maalgelinta Kobaca?
Maalgelinta kobaca waxay ka dhigan tahay isticmaalka sinnaanta, deynta, iyo farsamooyinka maalgelinta isku-dhafka ah ee shirkadda ee ballaarinta ganacsiga faa'iidada leh. Diirada maalgelinta kobaca waa in ay ahaataa aqoonsiga xalka ugu fiican ee maalgelinta shirkad.
Qaab dhismeedka maaliyaddu wuxuu ku xidhan yahay socodka lacagta caddaanka ah ee ku salaysan qiimaha ganacsiga iyo awoodda kobaca. Qaababka maalgelineed ee ugu wanaagsan ee wax-soo-iibsashadu waxay ku habboon yihiin xaaladda macaamilka waxaana laga yaabaa inay u baahdaan farsamooyinka maalgelinta shirkadaha iyo ilo maalgelineed oo aan caadi ahayn.
Maaliyadda kobaca waa deyn, guud ahaan ay taageerto hantidaada ganacsiga, taas oo bixisa raasumaalka loo baahan yahay si loo taageero fursad si weyn u kordhin doonta iibka ganacsigaaga.
Sidee badanaa loo qaabeeyey?
Maalgelinta kobaca waxay qaadan kartaa qaabab badan, laga bilaabo khadadka deynta bangiga dhaqameed ilaa deymaha SBA ee dawladda federaalka (Maamulka Ganacsiga Yaryar).
Dhammaan kuwan waxay dhalin karaan kheyraad badan, laakiin qaarkood way adagtahay in la helo halka kuwa kalena ay u baahan yihiin cabbir, waqti, iyo dukumeenti aad u badan si loo bilaabo.
Xaaladda kowaad, shirkaduhu waxay bixin karaan qiimo dhimis beddelka ballan-qaadka muddada-dheer ee iibsashada badeecada. Maalgelinta iibiyeyaasha inta badan waa mid baahsan, inkastoo ay ka qaalisanaan karto hababka kale ee maalgelinta ee lagu daro ama cusboonaysiinta qalabka iyo in iibiyeyaashu ay dib u soo celiyaan fursadaha kale sida maalgelinta deynta iyo isku xirka maaliyadda ayaa ah habab muhiim ah oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay u helaan maalgelinta kobaca. helaan.
Doorashooyinkani waxay inta badan isku daraan dhinacyada sinnaanta iyo maalgelinta deynta. Wakaaladaha horumarinta ganacsiga iyo deyman bixiyayaasha kale ayaa bixiya qiimeynta ogolaanshaha sare ee fursadahan maalgelinta, kuwaas oo intooda badan ku wajahan baahida maaliyadeed ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Hagaha Maalgelinta Kobaca Ganacsiga
Qorshaynta maaliyadeed ee adag waa aasaaska istaraatiijiyad kasta oo kobcin ganacsi. Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso inta maalgashi ee aad u baahan tahay si aad u maalgeliso ganacsiga marka aad u baahan doonto marka la heli karo, iyo sida ugu dhakhsaha badan ee aad dib ugu bixin karto caasimadda.
Liis garee dhammaan kharashyada ku baxay si aad u bilowdo doorashadaada kobaca oo barbar dhig dakhliga la filayo. Waxaad u baahan tahay inaad noqoto mid macquul ah oo wax ku ool ah dejinta yoolalka kobaca ganacsiga. Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha ay tahay inaad raacdo:
Saadaasha dhaqaalaha: Saadaasha socodka lacagta caddaanka ah ee faahfaahsan waa lama huraan, ugu yaraan sababtoo ah kharashka ayaa hubaal ahaan kor u kici doona si ka dhaqso badan dakhliga. Waxaad u baahan tahay inaad haysato lacag kugu filan dheriga si aad u sii wado ganacsiga ugu muhiimsan. Sidoo kale waa fikrad wanaagsan in la ururiyo lacag dheeri ah sababtoo ah mashaariicda noocan oo kale ah ayaa inta badan ka dambeeya jadwalka. Ka sokoow socodka lacagta caddaanka ah, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad samayso saadaal faahfaahsan oo ku saabsan iibka, raasumaalka shaqada, iyo ilaha maalgelinta bilowga ah ama dheeraadka ah.
Maalgelinta Maaliyadda: Marka laga reebo maalgelinta bangiyada, shirkadaha doonaya sinnaanta waxay leeyihiin saddex ilood oo waaweyn. Deyntu waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo lagu ilaaliyo hantida si loo maareeyo marka ganacsigu korayo.
Maalgelinta sinnaanta: Maalgelinta sinnaanta waa lacag la geliyo shirkad aan si toos ah loo bixin; Waxay noqon kartaa kaaga, oo ay u badan tahay inaad ka guurto hanti, ama lacag kuwa kale ee kor u qaadaya saamiyada si ay u noqdaan milkiilayaasha shirkadda
Daynta Khatarta: Shirkadaha heerka hore, deynta khatarta ah ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican. Shirkadaha bilawga ahi waxay caadiyan ka soo ururiyeen raasamaal ganacsi oo ay ka helaan maalgelinta raasumaalka, si xawli ah ayay u korayaan, socodka lacagta kaashka ahi waa taban, waxaanay u badan tahay inay u baahdaan maalgashi raasumaal ah dhawr bilood ilaa wareega xiga si shirkadu u gaadho wax badan.
Saamiga leverage-ka caadiga ah ee ay bixiyaan amaah-bixiyayaashu inta badan waa 20 ilaa 35% heshiis la'aan. Wadarta qiimaha amaahda waxaa ka mid ah khidmadda habaynta, dulsaarka go'an ee u dhexeeya 10% ilaa 12%, iyo dammaanad qaadyo (xaq u lahaanshaha iibsashada saamiyada, sida caadiga ah 0.5% ilaa 1% ka qayb qaadashada) raasamaal ganacsi, oo sidoo kale loo yaqaan maalgelinta sinnaanta gaarka ah. . Si ka duwan malaa'igaha ganacsiga, maal-qabeenada ganacsigu waxay raadiyaan inay ku maalgeliyaan lacag aad u badan (sida, xiisaha) shirkaddaada si ay raasumaalka ugu beddelaan.
Malaa'igta ganacsiga: Waa maalgashadayaal gaar loo leeyahay oo saamiga laga tirada badan yahay ama inta badan ka qaata shirkad inta badana leh khibrad ganacsi oo qiimo leh oo ah talo iyo xidhiidh. Kaabooyin, deeqo ganacsi, ama amaah ayaa sidoo kale laga heli karaa agagaarkaaga
Deymaha Kobaca iyo Khadadka Qaadashada XisaabaadkaMarka ganacsiyadu ay koraan oo dakhligoodu la saadaalin karo, amaahda kobaca iyo/ama khadadka credit waxay noqdaan doorashooyin macquul ah. Amaahda kobaca guud ahaan waxa ay leeyihiin waajibaadyo lagu dejiyay dakhliga qaarkood, EBITDA, ama heerka lacagta caddaanka ah ee ay tahay in ganacsigu buuxiyo; haddii kale dulsaarka dulsaarku wuu kordhaa inta lagu jiro wakhtiga fidinta juqraafiga. Waa inaan loo tixgalin shirkadaha hore ee aan lahayn moodallo waara ama marka qorshaha dhabta ah ee shirkadu aanu dhaafin heerarkii lagu heshiiyey.
Khadadka credit ee MRR (SaaS): Si loo kobciyo ganacsiyada SaaS ee leh dakhliga soo noqnoqda ee bishiiba (MRR) ee ka badan £ 500,000 kuwaas oo u baahan raasumaalka shaqada, SaaS khadadka deynta ayaa si fiican u qalma in la baadho. Khadka daynta ayaa yeelan kara axdi iyo/ama dammaanad iyadoo ku xidhan gubista lacagta caddaanka ah ee shirkadda. Hadhaaga deymaha ee la isticmaalay waxay xambaarsan yihiin dulsaar iyo helitaanka khadka deynta ayaa kordha marka MRR-ga uu kordho. Si kastaba ha noqotee, khadadka amaahda ee SaaS kuma habboona shirkadaha leh qiime sare ama inay maalgeliyaan jidka lacagta caddaanka ah.
Fursadaha maalgelinta koritaanka
Dib-u-maalgelinta faa'iidooyinka: Maalgelinta kobaca guud ahaan waxay la macno tahay dib-u-maalgelinta dhammaan faa'iidooyinka ganacsiga, ka tagista ugu yar, haddii ay jirto, raasumaalka shaqada ee xaashida dheelitirka baahiyaha jira.
Maalgelinta dhirta wax-soo-saarka: Xakamaynta wax-soo-saarkaagu waa faa'iido tartan leh. Wax-soo-saarka qandaraasku wuxuu inta badan keenaa hawl-qabad la'aan iyo kharashyo badan halkii la lahaan lahaa awoodda wax-soo-saarka. Lahaanshaha waxay siisaa soosaarayaasha hubinta tayada buuxda waxayna kordhisaa keenista wakhtiga ku haboon ee alaabta. Ilaha dakhliga bixiya wax soo saarka qandaraasyada, kaydinta bakhaar, iwm.
Kobaca Amaahda SBA: Barnaamijka amaahda ee Maamulka Ganacsiga Yaryar (SBA) wuxuu bixiyaa warshado farshaxan oo leh fursado korriin oo gaar ah. Amaahda Maamulka Ganacsiga Yaryar (SBA) waa beddelka inta badan isku xidha farqiga u dhexeeya wejiga sinaanta iyo wejiga amaahda caadiga ah.
Maalgashadayaasha iyo la-hawlgalayaasha: Maal-gashadayaasha sinnaanta waxay noqon karaan il wanaagsan oo raasumaal ah inta lagu jiro wejiyada ballaarinta, maadaama ay ku tiirsan yihiin socodka lacagta caddaanka ah mustaqbalka oo ay wadaagaan dakhliga mustaqbalka. Maal-gashadayaasha saxda ah waxay sidoo kale keeni karaan qiimo aan la taaban karin oo ah qaabka waayo-aragnimada warshadaha iyo xiriirka faa'iidada leh ee warshadaha.
Dammaanad-qaadyada iyo Tallaabooyinka: Amaahiyeyaasha caadiga ah waxay u baahan yihiin dammaanad iyo cabbirro xaashida dheelitirka si ay u kordhiyaan credit; wax inta badan ku yar inta lagu jiro ballaarinta. Waxay u baahan yihiin amnigaas sababtoo ah lacag lama siiyo si ay khatarta u galaan. Bangi xooggani wuxuu dib u soo celin ku leeyahay hantida inta u dhaxaysa 1.75%. Si tan loo eego, maalgashadayaasha saamiyadu waxay raadiyaan soo celinta 30% ama ka badan.
Goorta la maalgalinayo kobaca ganacsiyadaada
Ogaanshaha goorta la maalgelinayo kobaca waxay mararka qaarkood caqabad ku noqon kartaa milkiilayaasha ganacsiyada yaryar. Ganacsiyada intooda badan, korriintu waa ikhtiyaar, maaha arrin badbaado, in kasta oo ay badanaa tahay ikhtiyaar soo jiidasho leh.
Qaar ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga waxay qaataan hab aad u dagaal badan si ay u kobciyaan ganacsigooda; halka qaar kalena ay qaataan hab aad u dhawrsan oo si tartiib tartiib ah u koraya. Habka kasta oo aad u qaadato ganacsigaaga, sidee ku ogaan kartaa marka ay tahay waqtigii aad kobcin lahayd, iyo sidee ku ogaan kartaa haddii amaahda lacagaha lagu maalgeliyo kobaca ay tahay fikrad wanaagsan?
Ganacsiyada guulaysta ee aan raacin kobaca gardarrada ah, qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha ganacsiyada yaryar waxay rabaan in ganacsigoodu si degdeg ah u kordho. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, halkan waxaa ah calaamado sheeko-sheeko ah oo laga yaabo inay tahay waqtigii la kori lahaa:
Macaamiishaada hadda waxay rabaan inay wax badan iibsadaan: Awood u yeelashada inay fuliyaan rabitaanka iibsashada macaamiishooda waa caqabad ay badi milkiilayaasha ganacsigu rabaan inay la kulmaan. Tan waxa kale oo ay sabab u noqon kartaa qulqulka macaamiil cusub oo doonaya inay iibsadaan alaabtaada ama adeegaaga oo u baahan inay balaadhiyaan si ay u daboolaan baahida dheeraadka ah.
Suuqaaga ayaa koraya: Suuqa soo baxaya wuxuu noqon karaa fursad weyn oo lagu ballaariyo. Tusaale ahaan, haddii aad tahay ganacsi tuubooyin oo dhismaha gurigu korayo, waxaa laga yaabaa inay tahay wakhti aad ku darto tuubiste ama laba si loo daboolo baahida sii kordheysa ee suurtagalka ah.
Waxaad u baahan tahay boos badan: Mararka qaarkood waa sabab wanaagsan oo aad uga korto booskaaga hadda. Sida ganacsigaagu u korayo, macaamiishu way koraan oo waxaad u baahan tahay alaab badan. Ballaarinta goobtaada ama u guurista meel cusub waxay kor u qaadaa korriinka.
Soo hel badeecad wehel ah oo kordhin karta faa'iidada: Mararka qaarkood waxaa jira fursado korriin oo ah qaab alaabada la xidhiidha oo aad ku dari karto kaaga mar hore la soo bandhigay. Tusaale ahaan, ubaxleylaha ayaa laga yaabaa inuu helo khad cusub oo nacnac ama sholaatada si uu u iibiyo; ama waxaad kiraysan kartaa sawir-qaadaha barafka ee aroosyada iyo dhacdooyinka halkaas oo ubaxu inta badan door ka ciyaaraan.
Sidee ku ogaan kartaa in kobacani uu mudan yahay in la maalgeliyo?
Haddii kuwan soo socdaa ay sharxaan ganacsigaaga, ku maalgelinta kobaca credit waxay macno samayn kartaa. Waxaad hadda leedahay ganacsi caafimaad qaba oo leh lacag caddaan ah oo wanaagsan. Amaahda lacag si aad u koraan aad bay u fududahay (oo hubaal waa faa'iido badan) markaad leedahay ganacsi caafimaad leh.
Amaah bixiyuhu waxa uu rabaa in uu ogaado in aad haysatid lacagaha aad ku bixinayso lacagaha caadiga ah ee la xidhiidha amaahda si loo shido kobaca. Kharashka qaadashada amaahda sinnaanta waa in la tixgeliyaa ka hor intaanad cidna la hadlin. Kharash dheeraad ah si aad u kobciso ganacsigaaga.
Amaahdu waa tallaabo halis ah oo aan lagu qaadan hab "ku habboon surwaalkaaga" Hubi inaad ka fikirtay sida aad u isticmaali doonto leverage si aad u kobciso ganacsigaaga. Ma haysaa ROI la saadaaliyay ee maalgashiga deynta? Ma garanaysaa sida saxda ah inta aad u baahan tahay?
Sida ugu wanaagsan ee aad uga jawaabi karto su'aalahan, waxay u badan tahay in raasumaalka amaahda ahi uu sameeyo waxaad rabto, iyo inta badan ay u badan tahay in deyn bixiyuhu uu diyaar u yahay inuu ku siiyo deyn. Halkii aad samayn lahayd ganacsi dheeri ah: In laga hadlo korriinka iyo u diyaargarowgeeda mararka qaarkood waa laba shay oo kala duwan.
Haddii aadan hubin sida loola macaamilo ganacsiga dheeriga ah, markaas waxaa laga yaabaa inaysan caqli ahayn inaad qaadato culeyska deynta. si loo fududeeyo. Markaad haysato qorshe iyo habraac si guul leh ula qabsanaya kobaca oo aad ka maqan tahay raasamaal, waxaad si fiican uga faa'iidaysan kartaa isticmaalka kororka.
In aad u baahan tahay oo kaliya raasumaalka si aad u koraan waa fadeexad. Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aan la amaahin, waxaa muhiim ah in la hubiyo in dhaqaalaha amaahdu uu macno sameeyo. Qiimaha amaahashadu macno ma samaynayaa marka la eego ROI-ga la filayo ee mashruuca kobaca?
Ma samayn kartaa lacag-bixinno soo noqnoqda? Ma leedahay qorshe degdeg ah haddii ay wax qaldamaan? Kuwani waa dhammaan su'aalaha aad u baahan tahay inaad ka jawaabto ka hor intaadan codsan deyn si aad u maalgeliso kobaca.
Ganacsiyada doonaya in ay horumarkooda u qaadaan heerka xiga, maalgelinta kobaca ayaa bixisa agabka ay ku gaadhaan. Amaah bixiyayaasha beddelka ah waxay bixiyaan xawaare, dabacsanaan, iyo habab codsi fudud oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Waa muhiim in la raadiyo rikoodh la xaqiijiyay.
entrepreneurship.org/articles/1997/03/financing-growth-in ka badan-a-matter-of-money
Sida loo helo maalgelin ganacsi
10 Deymaha Bilowga Ganacsiga
Waa maxay Maalgelinta Kobaca Qaybsiga? | Hage Buuxa
10 Koorsooyin Maaliyadeed oo Bilaash ah oo Online ah oo wata Shahaadooyin
14 Aaladaha Kobaca Ganacsiga ee Bilaashka ah
Suuqgeynta Farriinta Qoraalka Sannadka 2022 | Faa'iidooyinka Iyo Sida Uu U Shaqeeyo
Sidee Venmo Lacag u Heshaa: Hagaha Buuxda ee 2022
Maaha wax aan la taaban karin in la yaabban sida apps caanka ah ay lacag u sameeyaan. xiisaha Tani waxay ka iman kartaa inta badan aad…
Sida Loo Bilaabo Meherad Nadiifinta Laga Soo Bilaabo xoqitaanka 2021?
Ganacsiga nadiifinta waa mid ka mid ah ganacsiyada ugu caansan uguna fudud ee aad bilaabi karto maanta. Laakiin adigu…